I-Semalt: Indlela Yokuvimbela Ugaxekile Ugaxekile - Amathiphu Okuphoqelela Ukukhumbula
Ukugijima ibhulogi noma iwebhusayithi ye-e-commerce kuyinto ezuzisa futhi evuzayo enika amathuba amaningi okukhulisa amabhizinisi nokwakha amathuba. Noma kunjalo, ama-idiots amaningana azama ukubhubhisa izinkampani eziku-intanethi futhi adale izithiyo kuwo wonke umuntu ngaphandle kwesizathu esithile. Abafuni ukwenza lutho ngaphandle kokudala ukungcola, futhi abakwa-spammers bokudlulisa bangomunye wazo. Kuphephile ukusho ukuthi abakwa-spammers abathumeli nabaqashi bangabaculi be-graffiti e-intanethi abahlale befuna ukushiya ukungabhaliseki kokubhala ku-intanethi.
Uma uhlola i-akhawunti ye-Google Analytics bese ubona ukwanda kwabathumeli abavela kumawebhusayithi angaziwa, kunamathuba wokuthi iwebhusayithi yakho ihlosiwe, futhi udinga ukuthatha izinyathelo ngokushesha. Amawebhusayithi athumela ugaxekile wokudlulisela ama-spam yi-hulfingtonpost - nokian hkpl2.com, priceg.com cenoval.ru, ne-bestwebsitesawards.com. Kungase kuzwakale engavamile, kodwa iningi labaphathi bewebhu nababhulogi abanalo umqondo wokuthi amasayithi abo athola ukubukwa okungalungile, iningi lawo livela kumasayithi esanda kuphawula ngenhla.
Ngenhlanhla, uMax Max, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uhlinzeka ngezindlela ezithile zokuvimbela lawo masayithi bese uyeka imoto yabo ekuphazamiseni amabhizinisi akho kwi-inthanethi.
Sebenzisa ifayela le-.htaccess ukuze ulwe nogaxekile logaxekile
Uma isayithi lakho lithathwa nge-Apache webserver, kuzodingeka ubuyekeze..ifayela le-htaccess. Indlela engcono kakhulu ukuvimbela ifayela le-.htaccess ukukhipha abakwa-spamm and bad bots. Ungabathumela futhi ku-Apache okungenzeka kube lula ngabo ukuqagela.
Ezimweni eziningi, abakwa-spammers nababo bazo ngeke bavakashele iwebhusayithi yakho. Ezimweni ezinjalo, kufanele uvimbele lezi bots kanye nokuzibuyisela kumawebhusayithi abo ngokufaka amakhodi akhethekile ku-akhawunti ye-Google Analytics. Ungaphinda udale izihlungi kuphrofayela yakho ye-Google Analytics, futhi izokusiza ukuba uthuthukise ikhwalithi yethrafikhi yakho. Ngenhlanhla, i-Google Analytics inikeza izinsiza eziningi zokuqeda abakwa-spammers kusuka kudatha ye-analytics nemibiko. Okukuphela kwehlelwa yile nqubo ukuthi ngeke isetshenziswe kuwo wonke amawebhusayithi ngesikhathi esisodwa.
Ngokucophelela Lungiselela Ukuhlunga Ibhodlela
Ungakwazi ukulungisa ngokuzenzakalelayo ukuhlunga ibhodlela. Ngenxa yalokhu, kufanele uhambe ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics bese udala i-Filter entsha. Khetha inketho yangokwezifiso bese ufaka ikhodi ethile kulokho.
Ikheli le-IP elivimba i-Referrer
Ungakwazi ukuvimbela kalula amakheli we-IP abathumeli be-spam. Ngithanda isinyathelo sokuvimbela ithrafikhi evela kuma-IP angaziwa. Kufanele uqiniseke ukuthi ukutholakala kogaxekile kunqatshelwa kuwebhusayithi yakho ngale ndlela.
Uhla lwezintandokazi ze-Google Analytics IP
Isinyathelo esilandelayo ukuqinisekisa ukuthi ulondoloze uhlu lokukhishwa kwe-Google Analytics IP. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi awukwazi ukujabulela imiphumela engcono kakhulu kuze kube yilapho ungafaki lolu hlu. I-Google Analytics inikeza inamba enkulu yezinketho zokukhipha uhlu futhi uvimbele amakheli e-IP. Ungakhetha kalula futhi ufake i-plugin kuwebhusayithi yakho, uqinisekise ukuphepha nokuvikelwa okuphelele.